Aqri | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 166
Posts in category Aqri
Afrikaan, October 5, 2015
AqriCaafimaadka iyo Sayniska
Hayadda Qaramada Midoobay ee caafimaadka ee WHO ayaa badashay talooyinkeeda ku saabsan HIV, iyagoo soo jeedinaya in qofkii laga helo viruska cudurkaas lagu daaweeyo daawada anti-retroviral isla markiiba. WHO ayaa sheegtay in tijaabo la sameeyay ay sheegtay in hadii goor hore la isticmaalo daawada ay dheeraysay nolosha dadka qaba HIV, ayna hoos u dhigtay qatarta gudbinta Viruska keena AIDSka. Waxay markii hore dhaqaatiirta kula taliyeen, in la sugo ilaa habka difaaca jirka uu sheego inay jiranayaan intaan daawada la siin. Talooyinka cusub ayaa badinaya dadka daawooyinka la siinayo oo ka dhigaya ilaa soddon iyo toddobo milyan oo qof.
Afrikaan, September 29, 2015
Sacdiyo waxay ahayd gabar kunool magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafada calanleey Waxeey eheed gabar qurux badan jecelna wax barashada aadna u fur furan. Walaalkeed oo joogay Sweden ayaa soowacay waalidkii una sheegay Sacdiyo ineey imaato Nairobi si uu uga kaxeeyo. Hassan oo ahaa Sacdiyo aabeheed ayaa u sheegay sacdiyo ineey dhowaan u anba bixi doonto dalka kenya kadibna kasii aadi doonto Sweden. Sacdiyo ayaa timi boosteejada laga soo anba baxo ee kutaala wadada Somali Star ee xaafada Calanleey. Sacdiyo ayaa sidan ku biloowday shekadeedi. 1/8/2008 waxeey eheed maalinta aan kasoo anba baxaayay magaalada kismaayo anigoo usoo kici tamaayay magaalada Nairobi.waxeey …
War ka soo baxay baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa lagu sheegay in la laalay mooshinkii ka dhanka ahaa madaxwaynaha dalka Soomaaliya, Xassan Sheekh Maxamuud. Mooshinka ayay horay ugu soo gudbiyeen baarlamaanka xildhibaanno sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay u soo jeedinayaa eedo dhowr ah. Warka ayaa lagu sheegay in xalka la gaaray kadib markii xildhibaanno ka tirsan Baarlamanka ee mooshinka soo jeediyay ay ogolaadeen wadahadalka lala yeehsay kadib markii ay kulmeen dhinacyadii uu khuseeyey mooshinka. Wariyaha BBC Ibraahim M Adan oo uu soo gaaray nuqul ka mid ah warka qoraalka ah ee ka soo baxay baarlamaanka, ayaa sheegay in la …
AqriMaqal & Muuqaal Arrimaha BulshadaQoyska & Horumarinta Bulshada
عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ Assalamu Calaykum Ayaan daranaa qof liidaya nafsadiisa una arko wax aan qiimo lahayn, shaqsiyada xumo waxaa ugu liidata inaad nafsadaada liido weligaa nafsadaada halla barbar dhigin qof kale, kaliya isku day inaad sameyso sidda ugu wanaagsan ee aad awoodo. Ma is weydiisay haddii aadan nafsadaada ku kalsoonaan cidda kugu kalsoonaan karto? sow ma ogid in uusan jirin qof la dhashay howsha uu qabto, ruux walbo waxa uu dhashay asagoo waxbo aanan garaneyn, hawl walbo oo uu qabtay maalin ayuu eber ka joogay oo uusan waxbo ka fahansaneyn. Ku kalsoonaanta nafta waa furaha lagu kaxeeyo gaariga guusha waana shardiga …
Afrikaan, September 24, 2015
Afrikaan, September 14, 2015